Obama oo ka hadlay bixitaanka Britain - BBC Somali
Obama oo ka hadlay bixitaanka Britain
25 Juunyo 2016
Image caption Obama ayaa sheegay inuu sii soconayo xiriirka Maraykanka uu la leeyahay Britain iyo Midowga Yurub.
Madaxweyne Obama ayaa sheegay in Maraykanka iyo Britain ay ka wada shaqeyn doonaan, sidii loo xaqiijin lahaa in ka bixitaankeeda Midowga Yurub aanu sababin dhibaato weyn oo dhanka dhaqaalaha ah.
Madaxweynaha ayaa telefoonka kula hadlay ra’iisul wasaaraha xilka kasii degaya, David Cameron, iyo hogaamiyaha Jarmalka, Angela Merkel, asaga oo u xaqiijiyan in Britain iyo ay Maraykanka la leeyihiin xiriir aad u adag.
Aqalka cad ee Maraykanka looga arrimiyo ayaa sheegay in Mr Obama uu weli rumeysan yahay, in Britain ay dhibaato badan kala kulmi doonto heshiisyada ganacsiga ee mustaqbalka, maadaama ay go’aansatay ka bixida Midowga Yurub.
Wasaaradda maaliyadda ee Maraykanka ayaa sheegtay in ay dejineyso xaalka suuqyada dhaqaalaha ee caalamka, ka dib walaacii ka dhashay natiijada aftidii ka dhacday Britain.